Drafitra sy fomba fanao | Fiaretana haran-dranomasina
Alohan'ny hanombohana tetikasa fampidirana substrate, dia tokony hodinihina maromaro ny famaritana raha mety ireo fomba ireo. Ny tetik'asa famerenana amin'ny laoniny misy rafitra sarotra dia mety ho lafo kokoa noho ny tetik'asa fanaovana zaridaina sy famindrana haran-dranomasina. Ohatra, raha tsy noforonina sy namboarina araka ny tokony ho izy dia mety hisaraka na hanjavona mandritra ny tafiotra ny rafitra. Na izany aza, ny fampiasana ny firafitry ny substrate dia afaka manome tombony tsy ho tratry ny fambolena haran-dranomasina fotsiny, toy ny fanafainganana ny fizotry ny fanarenana voajanahary amin'ny haran-dranomasina simba na tolotra fampandrosoana tia ny famokarana sy ny fiarovana ny morontsiraka. Ny drafitra dia tokony ahitana ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa eo an-toerana, anisan'izany:
Orinasa minisitra na governemanta ao an-toerana hahazoana ny fahazoan-dàlana ilaina sy ny fanombanana ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana
Ireo matihanina toy ny injenieran'ny morontsiraka hanampy amin'ny famolavolana drafitra sy ny drafitra ary amin'ny fananganana rafitra fananganana
Ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana mba hampihenana ny mety ho fiantraikany amin'ny estetika ao amin'ilay faritra, izay mety ho zava-dehibe amin'ny indostrian'ny fizahantany
Na dia mety henjana aza ny sasany amin'ireo fepetra ireo, dia maro ireo fiheverana ireo no modely sy novolavolain'ny sehatry ny engineering. Ny famolavolana sy ny fanombantombanana ny tetezana manify (na harambatotra) ambany dia efa nipoitra nandritra ny am-polony taona maro. Ny mpahay siansa sy ny mpitantana ny vatohara dia tokony hiara-hiasa amin'ireo injeniera mba hanomezana tombony ara-tontolo iainana tsara kokoa amin'ireo tetik'asa ireo.
Staghorn coral amin'ny EcoReefs. Sary © Meaghan Johnson / TNC
Ny haran-dranomasina ho toy ny tavoahangy
Ny vatoharan-dranomasina dia mahavariana mahomby izay manala ny angom-pahefana amin'ny alàlan'ny famelezana onja eny amoron'ny ranomasina. Rehefa mifindra amin'ny vatohara ny onja, dia miteraka fahasimbana izay manjavona sy manapotika na manapaka ny vatan'ny haran-dranomasina. Maro ireo antony mahatonga ny fiakaran'ny vatohara ho toy ny tetezana, ref ao anatin'izany:
Ny rano lalina: ny tohin'ny vatohara dia tompon'andraikitra amin'ny famoahana 97% ny angovo angovo eny amin'ny harambato. ref Noho izany, na ny fihenan-tsakafo kely eo amin'ny haavon'ny valan-java-bary dia mamela ny angovo mahery vaika hampakatra ny kintana. ref
Reef morphology: anisan'izany ny endrika sy ny halaviran'ny harambato ivelany, ny refin'ny haran-dranomandry sy ny vatohara (lava, ny sakany), ary ny loha amam-behivavy, ny vatoharan-dranomasina, ary ny fanamboarana hafa.
Reef width: anisan'izany ny valan-jiron'ny vatohara sy ny vatohara tafiditra. Ny harambato lehibe dia mamoaka angovo maromaro kokoa. ref Noho izany, na dia ny habakabaka misy vatohara aza dia mety hanaparitaka angovo betsaka.
Rugosity: na ny hamafin'ny faritry ny haran-dranomasina, dia miteraka disadisa ary misintona rehefa mihetsiketsika eny ambonin'ny haran-dranomasina ny onja ka mahatonga ny onja vaky sy ny hery hofoanana. Ny fiforonan'ny haran-dranomasina lehibe kokoa (> 30 cm) dia miteraka fikororohana sy fisintomana bebe kokoa noho ny fizotran'ny fasika na haran-dranomasina. ref Azonao atao, ohatra, ny mitifitra tsangambato misy harambato ary mety ho 10x lehibe kokoa noho ny faritra afovoan-tany, hany ka zava-dehibe ho an'ny fanodikodinana ny angovo angovo ny haran-dranomasina amin'ny vatohara ary manerana ny vatohara. ref
Mampiavaka ny Substrates miampy
Ny fametrahana ny vatohara, ny fitaovana ampiasaina, ary ny famolavolana dia singa manan-danja izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny rafitra substrate ho an'ny famerenana amin'ny laoniny. Mba hametrahana araka ny tokony ho izy ny habetsahana sy ny fametrahana ny rafitra dia tokony hiara-miasa amin'ny mpiara-miasa ny mpikaroka mba hahazoana tsipiriany bebe kokoa momba ny toetr'andro sy ny toetran'ny rano manodidina ny vatohara. Ny antony ara-boajanahary dia mety hamaritra ihany koa ny toerana misy ny rafitra, toy ny geomorphology amin'ny toeram-ponenana misy vatosoa na faritra izay mety hitrangan'ny korontana.
Ny fitaovana ampiasaina hananganana rafitra dia hisy fiantraikany amin'ny faharetana, ny fahamarinan-toerana, ary ny fitantanana maharitra ny rafitra. Ireo fitaovana isan-karazany dia mety hahasarika na mampiroborobo ny fametrahana ireo zavamananaina an-dranomasina samihafa. Ny tetikasa dia tokony hiezaka hanangana rafitra avy amin'ny vokatra voajanahary izay manohana ny famerenana ny vatohara fananganana vatohara, toy ny vatosokay avy amin'ny skelètona, vatosokay na fasika, na biôlôjika mahafinaritra, ny olona nanao fitaovana toy ny solika pH. ref
Ny haran-dranomasina voajanahary dia misy karazana fôsialy sy morphologies izay mamorona sehatra, lakandranomasina, ary crannies. Ireo fananganana ireo dia mampitombo ny firoborobon'ny haran-dranomasina izay mampihena ny angovo angovo ary mampiroborobo ny fahasamihafana eo amin'ny biôlôsy amin'ny fanomezana ny toeram-ponenana ho an'ny karazana kely. Ny endrika sy ny endriky ny rafitra dia tokony manandrana manamboatra ny fomba fiasa voajanahary voajanahary. Ny fomba iray hanatanterahana izany dia ny fananganana sombintsombin'ny haran-kisoa mivantana eo amin'ny rafitra artificial.
Fanorenana fanaka ankehitriny
Ireto ambany ireto ny orinasa maromaro izay mamorona sy mivarotra na mampiasa substrat artifisialy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara na ny fiarovana ny morontsiraka: ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoReef Balls (Beta pH-neutral)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEcoReefs (Tanimanga)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBioRock (vy miaraka amin'ny fametrahana elektro)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMars Symbioscience (mibaribary amin'ny fasika ety sy karajia)
Na dia ampiasaina amin'ny tetikasa famerenam-bidy isan-karazany aza ireny rafitra ireny, dia vitsy ny fikarohana natao mba hitsapana ny fampiasany sy ny fahombiazany amin'ny fampiroboroboana ny fiarovana ny morontsiraka. Na izany aza, ny Mpiaro ny natiora dia miasa any Grenada amin'izao tetik'etram-pilaminana izao, izay mandalo fanandramana miteraka firavaka ao amin'ny tontolo manodidina ny haran-dranomasina tsy dia misy angovo ary hanombana ny fahaiza-manaon'ny fanorenana ny fananganana ny haran-dranomasina sy ny angovo angovo.
Ny tetik'asa fananganana trano faneva dia mitaky famolavolana amin'ny antsipiriany ary tokony hampiditra ny fahaizana matihanina amin'ny famolavolana sy ny fanorenana.
Ny famindrana ireo sombintsombin'ny hodi-biby miaina any amin'ny tontolon'ny rano rehefa vita ny fanorenana dia mety hampihena ny fizotry ny fanjanahantany ary hampiroborobo ny famerenana ny tontolo iainana.
Ny fitaovana dia tokony hampidirina vokatra voajanahary izay mampitombo ny habaka miditra an-tsehatra mba hampiroboroboana ny fanjanahana ny vatohara ary hanomezana toeram-ponenana ho an'ny zavaboary vatosoa. Ny rafitra novolavolaina hanohanana ny mombamomba ny natiora, ny endrika ary ny fitaovan'ny haran-dranomasina dia mety hampiroborobo kokoa ny famerenana ny tontolo iainana.
Ny fambolena goavam-be miroborobo eo amin'ny sehatry ny vatohara dia miteraka ny fahasimbana faran'izay lehibe indrindra ary manan-danja indrindra amin'ny haavon'ny haavo, ka zava-dehibe tokoa ny miaro ny vatohara efa misy sy ny vatohara voajanahary amin'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny.
Tsy tokony haverina amin'ny faritra "tantara" ny vatohara. Raha mbola tsy nisy ny vatohara tany amin'ny faritra iray, dia tsy ho tafavoaka velona izy ireo ankehitriny. Ny tetikasa malaina namboarina dia tsy mahatratra ny tanjona, mety hamorona loza, ary mahatonga azy ireo ho sarotra kokoa amin'ny fanatanterahana tetikasa tsara taty aoriana.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny ezaka amin'ny fitantanana tanteraka (ohatra, anisan'izany ny fihazonana ny kalitaon'ny rano, ny fifehezana ny fitrandrahana ary ny fiarovana ny tontolo iainana) ho an'ny fahombiazana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fahombiazan'ny haran-dranomasina.
Ny soatoavina ara-kolontsaina sy ny fidirana ao an-toerana dia tokony hampidirina ao amin'ny fitsipika famerenana amin'ny laoniny. Ny lesoka avy amin'ny ezaka famerenana amin'ny ala honko dia mampiseho fa ny fandinihan'ny mponina ao an-toerana momba ny fatiantoka sy ny tondra-drano dia manan-danja kokoa noho ireo angona siantifika / toekarena amin'ny fiovàna ny fiovan'ny politika hanohanana ny fiarovana / famerenana azy ireo.
Ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ny fiarovana ny morontsiraka dia mety ho sarotra kokoa amin'ny faritra be mponina indrindra amin'ny toerana amoron-dranomasina / na ny toeram-ponenana avo lenta.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-tari-dalana momba ny fitantanana sy ny famerenana amin'ny laoniny ho fanatsarana ny fiarovana ny sisintany: toro-hevitra ho an'ny fampiharana maneran-tany miorina amin'ny lesona naterina tany Meksikamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGuía de Manejo sy Restauración de Arrecifes ho an'i Mejorar la Protección Costera: Recomendaciones ho an'ny Aplicación Global Basadas sy Lecciones Aprendidas en Méxicomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLineamientos Para el Manejo de la Dinámica de Erosión de Playas el Caribe Mexicomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy maha-zava-dehibe ny vatohara sy ny Dunes amin'ny fiarovana ny morontsirakamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoImportancia de los Arrecifes sy Dunas en la Proteccion de la Costamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana momba ny fomba hanomezana antoka ny fananana voajanaharymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVahaolana ho an'ny fahasimbana amin'ny vatohara: Manatsara ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara any Karaiba sy ny Atlantika Andrefana manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Atlas ny harena an-dranomasina manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-hevitra momba ny tontolo iainana momba ny fambolena kirany ambany